सलमान खानसंग अजय देवगनले लिए पंगा, अब कस्तो असर पर्ला त सलमान र अजयको सम्बन्धमा ? – Sanchar Patrika
सलमान खानसंग अजय देवगनले लिए पंगा, अब कस्तो असर पर्ला त सलमान र अजयको सम्बन्धमा ?
December 11, 2020 65
एजेन्सी । अजय देवगनले आफ्नो निर्देशनमा बन्न लागेको फिल्म ‘मेडे’ को घोषणा गरिसकेका छन् जसमा उनीसँग अमिताभ बच्चन र रकुलप्रित सिंह पनि देखिनेछन् । फिल्मको सुटिङ डिसेम्बर ११ अर्थात् आजके दिनबाट हैदराबादमा सुरु हुँदैछ र अजयले रिलिज डेट पनि योजना गरिसकेका छन् ।
अजयको यो फिल्म सन् २०२२ को इदमा रिलिज हुनेछ । इदमा खासगरी सलमान खानको फिल्म रिलिज हुन्छ । सन् २०२१ मा पनि उनी राधेलाई रिलिज गर्ने योजना बनाइरहेका छन् र सम्भवतः २०२२ मा पनि उनी कुनै न कुनै फिल्म इदमा रिलिज गर्नेछन् । त्यसैकारण अजयको ‘मेडे’ र सलमानको फिल्ममा टक्कर हुने सम्भावना छ । जबकी, अजय र सलमान निकै मिल्ने साथी हुन् । र आजको दिनसम्म सलमानको फिल्म मात्रै ईदमा रिलिज हुँदै आईरहेको छ ।
अजय आफ्नो फिल्म शुक्रबार, ९ अप्रिल, २०२२ मा रिलिज गर्नेछन् । अजय यो फिल्मका लागि निकै उत्साहित छन्, त्यसैले निर्देशनको बागडोर पनि उनी आफैंले सम्हालेका छन् । अमिताभ र अजय ८ वर्षपछि सँगै काम गरिरहेका छन् ।
Prevसूर्यबाट उछिट्टियो आगोको विशालकाय लप्का, अब विद्युत र सञ्चार प्रणालीमा गडबड हुन सक्छ
Nextफिल्मका डरलाग्दा भिलेन तर रियल लाइफका हिरो सोनु सुदले करोडौँ ऋण लिएर दिन दुखीका लागि सहयोग गर्दै
बिहे गर्ने बेलामा सानीमैया ११ वर्षकी थिइन्। धुमधाम राम्री। गोरी, ठूलाठूला आँखा। मान्छे सारै बेस, सबको भलाइ गर्ने। सबैलाई माया गर्ने। त्यस्तो भएर पनि कसरी मरिहालिन् …